Muxuu Trump xabsiga uga saarayaa siyaasiga xisbiga kasoo horjeeda ee Dimuqraaddiga? - BBC News Somali
Xigashada Sawirka, Joe Amon
Rod Blagojevich, oo sawirkan laga qaaday 2012, waxaa laga yaabaa in wakhti xukunkisa ka horreeya lasii daayo
Xitaa xubnaha ka tirsan xisbiga madaxweynaha ee kasoo jeeda gobolka Illinois way cambaareeyeen go'aanka Mr Trump.
Ergada gobolkaas u qaabilsan xisbiga Jamhuuriga ayaa bayaan ay soo saareen ku yiri: "Blagojevich wuxuu astaan u yahay musuqmaasuqa gobolka Illinois mana jirto mar uu muujiyay inuu arrintaas ka xun yahay".
Laakiin Trump dhag jalaq uma uusan siinin hadalkaas. "Kaani wuxuu ahaa hadal aad u awood badan, oo qallafsan", ayuu yiri mar uu Talaadadii la hadlayay warbaahinta.
Blagojevich oo kaliya ma ahayn dadka ka faa'iideystay naxariista madaxweynaha uu sameeyay Talaadadii. Trump wuxuu sidoo kale cafis u fidiyay saddex qof oo kale oo caan ah, saaxiibbo awood badanna ku leh siyaasadda.
Sanadkii 2008, wuxuu mas'uul ka ahaa magacaabista qofkii buuxin lahaa kursiga aqalka Senate-ka ee uu banneeyay Obama, kaddib markii madaxweynaha loo doortay.
Xigashada Sawirka, NYEIN CHAN NAING
Jan Schakowsky, oo ah xildhibaanad ka tirsan Dimqyraaddiga, ayaa horay garsoore uga codsatay in lasii daayo Blagojevich
"Hadda aniga ayey howl ii taallaa" ayuu yiri Blagojevich.
Kooxda dacwad oogeyaasha ah ee gacanta ku hayay kiiska Mr Blagojevich ayaa sheegay in madaxweynaha uu awooddiisa adeegsaday sii deynta ninkan, "laakiin wali uu yahay qof dambiile ah oo lagu helay musuqmaasuq".